सर्वश्रेष्ठ मोबाइल दर | अब तपाइँको बिल मा बचत गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
बजारमा उत्तम मोबाइल दरहरू उपलब्ध छन्
धेरै लामो समय सम्म, मोबाइल उपकरणको कुनै पनि प्रयोगकर्ताले केहि मोबाइल दरहरू बीच छनौट गर्न सक्दछ, जुन प्राय जसो केसाहरू धेरै समान थिए र जसको लागि हामीले ठूलो मात्रामा पैसा तिर्नु पर्‍यो। भाग्यवस, समय बित्दै जाने सबै कुरा धेरै परिवर्तन भएको छ र आज मोबाइल अपरेटरहरू बजारमा उपस्थित छन् जुन हामीलाई ठूलो संख्यामा मोबाइल दरहरू प्रदान गर्दछ। केहि धेरै सस्तो, जुन तिनीहरूको बिच ठूलो भिन्नता छ र सबै भन्दा भिन्न मूल्य संग। यसका लागि, आज हामी ती सबै बिच एक रमाईलो तुलना गर्न गइरहेका छौं। किनकि यो कतैबाट सुरू गर्न गाह्रो छ, हामी यो अब हामी भाँडामा लिन सक्दछौं शीर्ष तीन दरहरू समीक्षा गरेर गर्न जाँदैछौं:
सबैभन्दा सस्तो भाडा: GB for को लागि सिम्योको GB जीबी
सब भन्दा पूर्ण दर: १GB जीबी र असीमित भर्जिन टेलको केवल € for को लागि
उत्तम मोबाइल दर: २GB जीबी र असीमित फिनटवर्क केवल € १..25० को लागि
हाम्रो देशमा अझै तीनवटा ठूला अपरेटरहरू छन् जस्तै मोभिस्टार, भोडाफोन र ओरेन्ज, पछि पछिको क्लासिकमा MásMóvil (यो याद गर्नुहोस् कि यो योगोलाई महत्त्वपूर्ण बस्ट दिनको लागि प्राप्त भयो) र पछिल्लो भर्जिन टेलकोले यसको समर्थन गर्यो Euskaltel समूह द्वारा राष्ट्रिय आक्रमण। यि वरिपरि हामीसँग तथाकथित भर्चुअल अपरेटरहरू छन् जसले हामीलाई रोचक र सस्तो दर प्रस्ताव गर्दछ।
दर तपाईंको आफ्नै दर १० जीबी सिम्यो सिर्जना गर्नुहोस् 10GB € 6.११ / महिना
दर १..14.95 A अमेना २० जीबी र असीमित। € 14.95.११ / महिना
दर प्लस GB जीबी असीमित कल र GB जीबी € 8.90.११ / महिना
La SinFin दर असीमित डाटा र असीमित कलहरू € 35.११ / महिना
माथि सुन्तला दरमा जानुहोस् असीमित डाटा र असीमित कलहरू € 35.95.११ / महिना
यदि तपाइँ अपरेटरहरू परिवर्तन गर्ने वा दरहरू परिवर्तन गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, हामीसँग रहनुहोस् किनकि यस लेखमा हामी तपाईंलाई बजारमा उपलब्ध सबै भन्दा राम्रो सस्तो र यति सस्तो मोबाइल दरहरू देखाउँदैनौं.
हालको लागि मोबाइल दरहरू योइगो तिनीहरू बजारमा सब भन्दा आकर्षक हुन्, मुख्यतया जीबीको ठूलो संख्याको कारण उनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गर्छन् अपेक्षाकृत कम मुल्यमा। अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरूले लामो समयका लागि नेटवर्कहरू ब्राउज गर्छन्, कहिलेकाँही कम र कम कलहरू चाहिन्छ र व्हाट्सएप, फेसबुक वा अन्य धेरै अनुप्रयोगहरू मध्ये एक प्रयोग गर्न डेटा उपलब्ध हुन आवश्यक पर्दछ जुन स्थायी रूपमा इन्टरनेटमा जडित हुनुपर्दछ।
योगोले ती सबै प्रयोगकर्ताहरूको यो आवश्यकतालाई कब्जा गर्न व्यवस्थित गरेको छ जुन उनीहरूको डाटा योजनामा ​​मेगाबाइट्स बाहिर चल्दैनन्। वास्तवमा तपाईलाई पक्कै थाहा छ यसको सबैभन्दा प्रसिद्ध भाडा: La SinFín। यो दरसँग तपाईंको मोबाईलमा नेभिगेट गर्न असीमित जीबी छ र यसको साथै यसमा असीमित कलहरू पनि छन्। SinFín de Yoigo केहि दरहरु मा एक हो कि € 35 / महिना को लागी खर्च गर्न गीगाबाइट को यति उच्च मात्रा प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो मासिक शुल्कमा यो कटौतीको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्नुहोस्.
केहि महिनाहरुमा MásMóvil एक कम्पनी हुनबाट बगैंचामा धेरै उपस्थिति बिना भर्चुअल मोबाइल अपरेटरको रूपमा गएको छ चौथो स्पेनिश अपरेटर बन्नुहोस्, योइगोको खरीदको साथ।
MásMóvil को दर प्रस्ताव दुई मा विभाजित छ: दरहरू पहिले नै अपरेटरले कन्फिगर गरेका छन् र दरहरू जुन तपाईं आफ्नो रुचि अनुसार कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। MásMóvil ले हामीलाई प्रदान गर्ने योजनाहरू दुई हुन्: GB GB र पहिलो months महिनाको लागि € 8.० र असीमित कलको साथ GB १..8,90० को लागी २०GB।
असीमित कलहरू MásMóvil को पहिल्यै कन्फिगर गरिएको दरहरूको साधारण भाजक हो। तर यदि तपाई त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन तपाईको मोबाइल फोनमा कुराकानी भन्दा सर्फ गर्दछ, तपाईका लागि उत्तम विकल्प तपाईको दरलाई मापन गर्न कन्फिगर गर्नु हो। यस तरिकाले, तपाईं gigs को अधिकतम रकम (GB जीबी) थप्न सक्नुहुनेछ र ० सेन्ट प्रति मिनेटमा कलहरू। यस कन्फिगरेसनको साथ तपाईं MásMóvil पहिले नै GBGB सँग भएको तुलनामा केहि यूरो बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ क्लिक गरेर यी कुनै पनि दरहरूमा सम्झौता गर्नुहोस्.
सुन्तला भोडाफोनसँग मार्केटमा दोस्रो मोबाइल अपरेटर बन्ने सुअवसर पाउनको लागि हाल कडा बोलीमा छ। यसको लागि यसले भर्खरको समयमा यसको सबै दरहरूको नवीकरण गरेको छ, जसको परिणाम स्वरूप सबै भन्दा विस्तृत र रमाईलो हुन्छ। सात बर्ष पछि हामी प्रसिद्ध पशु शुल्क फेला पार्न सक्दैनौं, तर हामीले मार्ग दिएका छौं दरहरू जानुहोस्.
प्रयोगकर्ताहरू जसले मात्रा र गुणको सर्तमा धेरै माग गर्छन् भाग्यमा छन्, किनकि गो दरहरू ती बिन्दुहरूमा ठीक प्रतिक्रिया गर्दछन्। यस अर्थमा, सुन्तले हामीलाई दर प्रदान गर्दछ माथि जानुहोस् र माथि जानुहोस्, जसमा दुबै असीमित डाटा छन्, प्रत्येक प्रस्तावको भिन्नता उच्च गुण (एकमा एचडीमा र अर्कोमा K केके पुग्न सक्छ) र दुबै असीमित कलहरूको साथ स्ट्रीमि content सामग्री अवलोकन गर्ने क्षमतामा निहित छ।
तर नेभिगेट गर्न यति धेरै गीगाबाइट्सको साथ दरहरू सबै दर्शकहरूको लागि होईन र यो केहि चिन्ताको विषय हो। यही कारणले, यसले कम गिगका साथ तीन अन्य दरहरू प्रदान गर्दछ: आवश्यक, गो लचिलो र बच्चाहरू। आवश्यक संग, सुन्तलाले हामीलाई GB जीबी प्रदान गर्दछ र ० सेन्टमा १€.. / / महिनामा कल गर्दछ। सुन्तलाको गो लचिलो दरले हामीलाई १.7..0 जीबी र limited २..14,95 / / महिनाको लागि असीमित कलहरू हुने सम्भावना दिन्छ। अन्तमा, बच्चाहरूको दरसँग २ जीबी सम्म internet / 16,67 GB / महिनाको लागि इन्टरनेट हुन्छ र जुन तपाईंको ट्याब्लेट वा ल्यापटपको लागि आदर्श हो। यदि तपाईं गो डे ऑरेंज दरहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ यहाँबाट सजीलै भाडामा लिनुहोस्.
रातो कम्पनी स्पेनी क्षेत्र भित्रका ठूला व्यक्तिहरू मध्ये एक हो र त्यो पक्कै पनि हामीलाई धेरै मोबाइल-मात्र दरहरू प्रदान गर्दछ। सुन्तला वा मोभिस्टार जस्ता, भोडाफोनले हामीलाई सबै प्रकारका दरहरू प्रदान गर्दछ, सबै भन्दा विविध विशेषताहरू र सबै प्रकारका मूल्यहरूको साथ।
रातो कम्पनी सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूसँग नजिक छ, जो धेरै मेगाबाइट र मिनेट खान्छन् जोसँग मात्र एक वा अन्य खर्च गर्छन्। यसैले हामीसँग छ मोबाइल मिनी, असीमित, असीमित मक्सी र असीमित कुल जो डेटा र आवाज मिनेट को मामला मा धेरै खपत।
जो अधिक कुरा र डाटा खपत गर्नेहरूका लागि, भोडाफोनले असीमित कुल जीबी असीमित 5G, असीमित मिनेटमा प्रस्तुत गर्दछ। यी सबै € 47,99 / महिना को लागी। मध्यवर्ती दर असीमित i जी + नेटवर्कमा असीमित मैक्सी मार्ग, असीमित मिनेटहरूमा छ। यी सबै €4/ महिना को लागी। अन्तमा, असीमित भनेको G जी नेटवर्क (अधिकतम डाउनलोड गति २ एमबीपीएस) मा असीमित डाटा र month२.36,99 प्रति महीनाको असीमित मिनेटको साथ एक प्रस्ताव हो।
यदि तपाईं भोडाफोन मोबाइल दरहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई यहाँबाट minutes मिनेट भन्दा कममा भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ.
Movistar वा उस्तै के हो भने, पुरानो टेलिफनिका मोबाइल टेलिफोनी बजारको महान प्रबर्धक हो, यसको राम्रो कभरेजको लागि हाम्रो देशको कुनै पनि कुनामा र यसको ग्राहकहरु लाई राम्रो सेवाका लागि धन्यवाद छ। दुर्भाग्यवश उनीहरूका मूल्यहरू हामी सबैलाई चाहानुहुन्छ कम छैन।
बाँकी अपरेटरहरूले गरे जस्तै, मोभिस्टारले पनि आफ्नो मोबाइल दर प्रस्ताव परिमार्जन गरेको छ, यद्यपि ओरेन्जले गरे जस्तो गहन रूपमा छैन। यस अर्थमा, मोभिस्टारले हामीलाई तीन दरहरू प्रस्तुत गर्दछ, जसमा गीगाबाइटको ठूलो संख्या बाहिर आउँदछ।
La Movistar अनुबंध २ दर यो "आधारभूत दर" को रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, किनकि यसले हामीलाई हाम्रो मोबाइलको साथ नेभिगेट गर्न GB जीबी प्रदान गर्दछ र € १ minutes / महिनामा in० मिनेट कल हुन्छ। यदि हामी मोभिस्टार पोर्टफोलियोमा जान्छौं भने, अर्को दर XL अनुबन्ध हो जसले हामीलाई १GB जीबी र ल्यान्डलाइन र मोबाइलमा असीमित मिनेट कल offers २..5 € प्रति महिना प्रदान गर्दछ। दरहरूको अन्तिम, अनन्त सम्झौता, असीमित जीबी, मिनेट र SMS। .. / / महिनाको मूल्यको एसएमएसमा छ।
अर्को भर्चुअल अपरेटर जुन यस सूचीबाट हराउन सक्दैन पेफेफोन यसले हामीलाई केहि प्रतिस्पर्धी दरहरू प्रदान गर्दछ, सबै पक्षहरूमा जुन हामी बजारमा फेला पार्न सक्दछौं। विशेष रूपमा, यसले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ तीन दरहरू जुन धेरै प्रतिस्पर्धी छन् बजार को बाँकी सन्दर्भमा। यस तरिकाले, हामी पहिलो दर फेला पार्छौं जुन GB 5.० / महिनाको लागि GB जीबी र असीमित कलहरू समावेश गर्दछ। मध्यवर्ती दरले हामीलाई १० महिनाको र 7,90 ११.० limited प्रति महिना असीमित मिनेटहरू प्रस्ताव गर्दछ।
अन्तमा, हामी फेला पार्दछौं जुन सबैभन्दा बढी लाभदायक दर हुन सक्छ: GB GB.० जीबी र असीमित मिनेटहरू calls १। ..० / महिनाको लागि कल गर्नका लागि।
हो साथीहरु, Amena फिर्ता आएको छ। हरियो अपरेटर त्यस समयमा हामी सबैको साथ थियो र हामी भन्न सक्छौं, यो क्लासिक हो जब यो मोबाइल टेलिफोनीमा आउँदछ। अमेना ओरेन्जको साथ जीवनमा फर्की आएको छ र यसको दरहरू शानदार छन्। यो अपरेटर अनुकूलनको पर्यायवाची हो र तिनीहरूले यसलाई स्पष्ट रूपमा उनीहरूको दरका साथ प्रदर्शन गर्छन्। यसका मोबाइल योजनाहरू प्रत्येक प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूमा केन्द्रित छन्: उनीहरूको मोबाइल एक थोरै प्रयोग गर्नेहरूको लागि एक दर, केही बोल्नेहरूका लागि र अर्को दुई सबै कुरा चाहनेहरूका लागि। चार शानदार दरहरू।
पहिलो दर उनीहरूको लागि हो जुन आफ्नो फोनको घरको बाहिरी भाग मुश्किलसंग प्रयोग गर्छन्। अमेनाले उनीहरूको बारेमा सोचे र4जीबी प्रस्ताव गर्दछ, ० सेन्ट एक मिनेटमा कल गर्दछ र असीमित एसएमएस €06,95 / / महिनाको लागि। तर यदि तपाई तपाईको मोबाईल फोनबाट केहि कुरा गर्नुहोला, तपाई सायद १० जीबी, असीमित मिनेट र असीमित एसएमएसको साथ month 10। 9,95 प्रति महिनाको लागी दरमा रुचि राख्नुहुनेछ।
हरियो कम्पनीले तपाईलाई २ plan जीबी, असीमित कल र १।। / / / महिनाको लागि एसएमएसको साथ मोबाइल योजना प्रदान गर्दछ। तर यदि १० जीबी तपाईको लागि पर्याप्त छैन भने, भर्खरको योजनाले तपाईलाई अझ बढी चासो दिनेछ। अन्तिम दरले तपाईंलाई GB०GB, असीमित कल र SMS २..25 / / महिनाको लागि SMS प्रदान गर्दछ।
हामीलाई थाहा छ कि अमेना दर छनौट गर्न धेरै गाह्रो छ किनकि ती वास्तवमै राम्रो छन्। यदि तपाईंले अझै निर्णय गर्नुभएन भने, यस लिंकमा तपाईं अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
सिम्यो सुन्तला संयोग होइन र यो एक कम्पनी हो जुन सुन्तला समूहसँग सम्बन्धित छ। जे होस्, सिम्योसँग एक दुर्लभ र व्यावहारिक रूपमा अद्वितीय सुविधा छ: तपाईं आफ्नै दर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अधिक वा कम डाटा र अधिक वा कम आवाज मिनेटको साथ तपाईंको योजना विन्यास गर्न सक्नुहुनेछ। तिमि के चाहन्छौ।
निजीकृत दर कन्फिगरेसन कसरी कार्य गर्दछ भनेर वर्णन गर्नु अघि, म तपाईंलाई दरहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु जुन सिम्योले पहिले नै तपाईंलाई कन्फिगर गरेको प्रस्ताव गर्दछ। कम्पनीले हामीलाई चार दरहरू प्रदान गर्दछ जुन हामी सम्झौता गर्न सक्छौं। हामीसंग कोटा बिनाको दर छ, त्यो ० युरो छ। हामीसँग एक मिनी दर छ जुन २० मिनेट कलहरू र १००MB प्रति महिना € २ को लागि समावेश गर्दछ। WhatsApp० मिनेट कल र M०० एमबीको € .0. / / महिनाको लागि व्हाट्सएपको लागि उत्तम दर। र अन्तिम पूर्वसेट ती जो धेरै कुरा गर्छन् र सर्फ गर्छन्। यसले हामीलाई १०० मिनेट र १.20 जीबी प्रति महिना .100 €।। को लागि प्रस्ताव गर्दछ।
यदि माथिका कुनै पनि दरहरूले तपाईंलाई विश्वास गर्दैन भने, याद गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नै तरिकाले सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ धेरै साधारण तरीकाले। पहिलो चीज तपाईले छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलका साथ नेभिगेट गर्न डेटा। तपाईं ब्राउज गर्न डाटा छनौट गर्न सक्नुहुन्न, तर अधिकतम २GB जीबी। पछि, तपाईंले ० मिनेटबाट असीमित कलहरूमा कल गर्न मिनेटको संख्या रोज्नुपर्नेछ। हाम्रो सिफारिश, यस मामला मा, धेरै स्पष्ट छ: आफ्नै दर बनाउनुहोस्। तपाईले डेटा र भ्वाईस मिनेटको सर्तमा के खर्च गर्न चाहानुहुन्छ भनेर छनौट गर्नु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। जहाँसम्म, तपाईं सिम्योले दिने बाँकी सम्भावनाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्.
लोई मोबाइल फोन कम्पनिहरु मध्ये एक हो जुन प्रयोगकर्ताहरु द्वारा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान छ, यसको सबैभन्दा किफायती मूल्यहरू र पूर्ण रूपमा हाम्रो रुचिमा दर सिर्जना गर्ने सम्भावनाको लागि धन्यवाद। तपाईसँग तपाईको दर 8 जीबी देखि GB० जीबी सम्म डाटा तपाईको मोबाइलमा कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ र भ्वाईस मिनेटको सर्तमा तिनीहरूसँग असीमित कलहरू छन्।
यदि हामी तिनीहरूको दरहरू मध्ये एकसँग रहन्छौं भने त्यो पनी rate.8 € प्रतिमाहका लागि GB जीबीको साथ निस्सन्देह आफैको दर हुनेछ। एक सुपर प्रतिस्पर्धी मूल्य र व्यावहारिक अपराजेय। तपाईले बाँकी सम्भवलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाट सेटिंग्स र विशेषताहरु को दर.
तपाईले कुन दरमा हालै अनुबन्धित गर्नुभयो र कुन परिवर्तन गर्नुहुन्छ यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने? तपाईंले देख्नु भएको छ, संभावनाहरू अनन्त छन् र सबै तपाईंमा निर्भर गर्दछ। बसोबास नगर्नुहोस् र यस प्रविष्टिमा रहनुहोस् किनकि हामी यसलाई हरेक महिना अपडेट गर्नेछौं। र यदि तपाईंले यहाँ आफ्नो उत्तम दर फेला पार्नुभएन भने, तपाईं जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Roams टेलिफोनी तुलनाकर्ता सबै भन्दा राम्रो विकल्प पत्ता लगाउन जुन तपाईंलाई बचत गर्न अनुमति दिन्छ।